Iminyaka engu-20 isipiliyoni ekwakheni ifenisha yokhuni eqinile, ifenisha yakudala, amagumbi okulala, amasethi egumbi lokudlela, isethi yegumbi lokuhlala | Ifenisha ye-goodwin
Ukunethezeka okunesizotha kungubuciko,
Isikhathi sifakazela imizwa yangempela!
Umgomo wethu ukwanelisa amakhasimende ethu ngobuciko obuphezulu nangekhwalithi ethembekile ukuqinisekisa ukuthi wonke amakhasimende angazizwa ekhululekile futhi ezethembile ngezimpahla zethu ezinhlelweni zawo zokusebenza.Imikhiqizo yethu ithola kakhulu izicelo zayo emakethe ngenxa yezindawo ezinhle. Zinezici eziningi ezigunyaza ukwenziwa kanye nokusetshenziswa.
Umklamo wakamuva wosofa wakudala wamapulangwe owenziwe eChina | UGoodwin GH59
Ikhaya kulapho inhliziyo ikhona. Khetha usofa owenziwe ngokhuni oyingqayizivele, wakudala onamanani entengo futhi enzelwe kahle ikhaya lakho lamaphupho. Singumkhiqizi odumile waseMelika odala ifenisha eChina, uGoodwin uyisinqumo sakho esingcono kakhulu. Xhumana nathi ukuthola i-sofainfo yakudala yamapulangwe. Imininingwane: Tess Ucingo: 0086-76923188817 noma iselula: 0086-13925525570 Iwebhusayithi: www.goodwinfurniture.com
Usofa wefektri waseChina, usofa omnyama wasendulo wegumbi lokuphumula iGoodwin GH55
Sizibophezele ekwakhiweni nasekukhiqizeni usofa omnyama wasendulo wegumbi lokuphumula iminyaka engaphezu kwengu-20. Ukulwela ikhwalithi yomkhiqizo ongcono nokwakhiwa. Ifenisha kaGoodwin, umculi wempilo. Singumkhiqizi odumile waseMelika odala ifenisha eChina, uGoodwin uyisinqumo sakho esingcono kakhulu. Xhumana nathi ukuthola usofa omnyama wasendulo wemininingwane yegumbi lokuphumula. Imininingwane: Tess Ucingo: 0086-76923188817 noma iselula: 0086-13925525570 Iwebhusayithi: www.goodwinfurniture.com
Ifenisha ye-goodwin engcono kakhulu intengo yokuthengisa eshisayo yasendulo yezincwajana ezimhlophe zokhuni gh43
Sizibophezele ekwakhiweni nasekukhiqizweni kwentengo eshisayo yokuthengisa ye-Antique Bookfoncase Wooden iminyaka engaphezu kwengu-20. Ukulwela ikhwalithi yomkhiqizo engcono nokwakheka. Ifenisha ye-goodwin, umdwebi wempilo.Singumkhiqizi odumile wefenisha yaseMelika eChina, i-goodwin yisinqumo sakho esihle kakhulu.Xhumana nathi ukuthola amanani athe xaxa athengiswayo ama-antique Book info yokhuni.Ukuxhumana: Ama-TessUcingo: 0086-76923188817 noma iselula: 0086-13925525570Iwebhusayithi: www.goodwinfurnurn.com
Isitayela se-villa sokufika kombhede omusha wesikhumba esidala | UGoodwin GF01
Umbhede omusha wesikhumba wasendulo wokufika ngumkhiqizo wethu oyinhloko, ifenisha yasekhaya yokhuni oluqinile efaka amakamelo okulala, osofa, amasethi okudlela, amatafula ekhofi, amatafula, izihlalo, imibhede, nokuningi. Ikhwalithi ye-premium, imiklamo yezithonjana. Singumkhiqizi odumile wefenisha yaseMelika eChina, uGoodwin uyisinqumo sakho esingcono kakhulu. Xhumana nathi ukuthola ulwazi olusha lokufika lwe-antique lesikhumba. Imininingwane: Tess Ucingo: 0086-76923188817 noma iselula: 0086-13925525570 Iwebhusayithi: www.goodwinfurniture.com
Isevisi yokwenza ngokwezifiso yezidingo zebhizinisi ezihlukile noma eziyinselele.
1.Ukubuza: Amakhasimende atshela into oyifunayo yefomu, imininingwane yokusebenza, umjikelezo wempilo, nezidingo zokuhambisana.
3. Ukuphathwa Kwekhwalithi: Ukuze sihlinzekele ngezakhiwo ezisezingeni eliphakeme, sigcina okusebenzayo& Uhlelo Lokulawulwa Kwekhwalithi olusebenzayo.
Sigxilile ngokuphelele ezweni lomkhiqizo lamakhasimende ethu. Kodwa asigcini nje ngokungena ezicini ezithile zomkhakha; siphinde sihlolisise imibuzo enjengokuthi: "Yini eyenza amakhasimende ethu amakhasimende ajabule?" "Singasivusa kanjani isifiso sokuthenga somthengi sokugcina?" Nakhu esizokwenza nawe. Le yindlela esenza ngayo iphrojekthi yakho ibe yiphrojekthi yethu.
Muva nje ama-feedbacks angempela avela kumakhasimende ethu wakamuva emhlabeni wonke jikelele emhlabeni jikelele
Muva nje ama-feedbacks angempela avela kumakhasimende ethu wakamuva emhlabeni wonke.Singumhlinzeki wefenisha wefenisha oqinile waseMelika oqinile uFoodwin ovela eChina eneminyaka engama-20 yokuphuma kwamanye amazwe efenisha. Ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme nensizakalo ephakeme, imikhiqizo yethu ihlanganiswa kuwo wonke amagumbi omhlaba.Amakhasimende amaningi athenga ifenisha efektri yethu futhi athanda ifenisha yethu kakhulu njengempendulo yevidiyo.Xhumana nathi ukuthola ifenisha yokhuni oluqinile.Ukuxhumana: Ama-TessUcingo: 0086-76923188817 noma iselula: 0086-13925525570Iwebhusayithi: www.goodwinfurnurn.com
Iklayenti le-Goodwin Wholesale eMbonisweni Yakhe Yokubukisa
Ividiyo yangempela nempendulo evela kwiklayenti lethu. Uthanda ifenisha yethu kakhulu.Idizayini eyenziwe ngokwezifiso yefenisha iyatholakala.Sicela uxhumane nathi ukuthola ifenisha yezinkuni eqinile.Ukuxhumana: Ama-TessUcingo: 0086-76923188817 noma iselula: 0086-13925525570Iwebhusayithi: www.goodwinfurnurn.com
Ithebula lekhofi eliqeqeshiwe kumakhasimende ethu ehholo lemibukiso le-WA219
Khetha ifenisha yezinkuni eqinile eqinile eqinile yegumbi lakho (igumbi lokuhlala / igumbi lokulala / indawo yokudlela / njll). Khetha kusuka emiklamo yethu ehlukile bese ungeze egumbini lakho lokuhlobisa. Thenga online.Xhumana nathi ukuthola eminye i-Wholesale Wood Wood Fenisha Info.Ukuxhumana: Ama-TessUcingo: 0086-76923188817 noma iselula: 0086-13925525570
Ifenisha ye-goodwin ehamba phambili ebekwe efektri yamakhasimende ethu
Ifenisha ye-goodwin ingumhlakani yokudlela enamapulangwe ebekwe eChina. Iminyaka engama-20 yesipiliyoni sokuthekelisa ifenisha. Ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme nensizakalo ephakeme, imikhiqizo yethu ihlanganiswa kuwo wonke amagumbi omhlaba.Singumkhiqizi odumile wefenisha yaseMelika eChina, i-goodwin yisinqumo sakho esihle kakhulu.Xhumana nathi ukuthola eminye imizwa yokudlela yamapulangwe.Ukuxhumana: Ama-TessUcingo: 0086-76923188817 noma iselula: 0086-13925525570Iwebhusayithi: www.goodwinfurnurn.com
I-Dongguan Goodwin Furniture Co., Ltd
I-Dongguan Goodwin Furniture Co., Ltd yasungulwa ngo-2001, eseHoujie, eDongguan, idolobha elidumile lokukhiqiza eChina, elimboza indawo engamamitha-skwele ayi-120,000. Sigxila ephezulu isitayela saseMelika ifenisha yokhuni oluqinile, futhi sizibophezele ekwakhiweni, ekukhiqizweni nasekuthengisweni kwefenisha yehhotela / yasekhaya.
Njengamanje, sinabasebenzi abangaphezu kwama-580, kufaka phakathi abacishe babe yikhulu abasebenzi bezobunjiniyela nabaphathi bezobuchwepheshe emazingeni ehlukene. Ithimba lokuklama elihle kakhulu nethimba lezinsizakalo, elinamathela ebuhleni bekhwalithi yomkhiqizo nokuphishekela ubuciko obuhle. Njengomkhiqizi wefenisha ochwepheshe, siyabambisana namabhizinisi amaningi asekhaya asaziwayo njengeSheraton, iShangri-La, i-InterContinental, iMarriott, iRitz Carlton, njll. Okwamanje, imikhiqizo yethu ithengiswa emhlabeni wonke, ikakhulukazi eRussia, e-Ukraine, eLithuania , Bulgaria, France, Dubai nakwamanye amazwe amaningi. Wonke amaklayenti anelisekile ngekhwalithi yethu.
Ifenisha yaseGoodwin ithobela umqondo wentuthuko esimeme, ehlose ukuhlinzeka abantu ngefenisha esezingeni eliphezulu nempilo enhle. Siyaqiniseka ukuthi ikhwalithi yomkhiqizo wethu nesitayela kungahlangabezana nezidingo zakho. Sibemukele ngemfudumalo bonke abathengisi bezebhizinisi bamanye amazwe ukuxhumana nathi futhi bavakashele imboni yethu!